Bit By Bit - Mass mmekota - 5.1 Okwu Mmalite
Wikipedia na-eju anya. A uka mmekota ndị ọrụ afọ ofufo kere a kediegwu akwụkwọ nkà ihe ọmụma na dị ka onye ọ bụla. Isi ihe na-Wikipedia ịga nke ọma abụghị ihe ọhụrụ ihe ọmụma; kama, ọ bụ ọhụrụ ụdị mmekota. The dijitalụ afọ, dabara nke ọma, na-enyere ọtụtụ ụdị ndị ọhụrụ nke mmekota. N'ihi ya, anyị kwesịrị now ịjụ, sị: ihe oke na nkà mmụta sayensị nsogbu-nsogbu ndị anyị na-apụghị idozi n'otu n'otu-anyị pụrụ now mee ihe maka ọnụ?
E nwere ọtụtụ iche nke uka mmekota, na kọmputa ndị ọkà mmụta sayensị a hazie ha n'ime ọnụ ọgụgụ dị ukwuu ige dabere na ha technical e ji mara (Quinn and Bederson 2011) . Ke ibuot emi, Otú ọ dị, m na-aga categorize uka mmekota oru ngo dabeere na otú ha ga-eji na-elekọta mmadụ nnyocha. Karịsịa, m na-eche na ọ bụ na-enye aka ịmata ọdịiche dị n'etiti atọ ụdị oru ngo: mmadụ mgbakọ, na-emeghe oku na-aga, na-ekesa data collection (ọgụgụ 5.1).
M ga-akọwa onye ọ bụla nke a na ụdị ha n'ụzọ zuru ezu gasịrị na isi, ma n'ihi na ugbu a ka m kọọ onye nke ọ bụla ruo nwa oge. Human mgbakọ oru ngo na-kwesịrị ruru eru maka mfe na ọrụ-big-ọnụ ọgụgụ nsogbu ndị dị otú ahụ dị ka ịkpọ a nde oyiyi. Ndị a bụ ọrụ na n'oge gara aga nwere ike e rụrụ site Undergraduate nnyocha na-enyere aka. Onyinye-anaghị achọ ọrụ metụtara nkà, na ndị ikpeazụ mmepụta bụ a na nkezi nke niile nke onyinye. Omuma atu putara ihe nke a mmadụ mgbakọ ngo bụ Galaxy Zoo, ebe a narị puku afọ ofufo nyeere-enyocha mbara igwe were a nde galaxies. Open oku na-aga oru ngo na-kwesịrị ruru eru maka nsogbu ebe ị na-achọ akwụkwọ na-atụghị anya azịza doro anya formulated ajụjụ. Ndị a bụ ọrụ na n'oge gara aga nwere ike aka na-ajụ ibe ya nọ. Onyinye si ndị mmadụ nwere pụrụ iche ọrụ metụtara nkà, na ndị ikpeazụ mmepụta na-abụkarị ihe kasị mma nke ihe nile nke onyinye. Omuma atu putara ihe nke na-emeghe oku na-aga bụ Netflix Nrite, bụ ebe ọtụtụ puku ndị ọkà mmụta sayensị na hackers-arụ ọrụ ịzụlite ọhụrụ algọridim ịkọ ahịa 'Fim nke fim. N'ikpeazụ, na-ekesa data collection oru ngo na-kwesịrị ruru eru maka nnukwu-ọnụ ọgụgụ data collection. Ndị a bụ ọrụ na n'oge gara aga nwere ike e rụrụ site Undergraduate nnyocha na-enyere aka ma ọ bụ nnyocha e mere nnyocha ụlọ ọrụ. Onyinye a na-abịa site na ndị mmadụ nwere ohere ọnọdụ na-eme nnyocha na-adịghị, na ikpeazụ ngwaahịa bụ ihe dị mfe collection nke onyinye. Omuma atu putara ihe nke a na-ekesa data collection bụ eBird, nke ọtụtụ narị puku ndị ọrụ afọ ofufo na-eme na-akọ banyere ụmụ nnụnụ ha na-ahụ.
Mass mmekota nwere ogologo, ọgaranya akụkọ ihe mere eme na ubi ndị dị otú ahụ dị ka mbara igwe (Marshall, Lintott, and Fletcher 2015) na ọmụmụ ihe dị ndụ (Dickinson, Zuckerberg, and Bonter 2010) , ma ọ bụ ma nkịtị na-elekọta mmadụ nnyocha. Otú ọ dị, site n'ịkọwa ihe ịga nke ọma oru ngo site na ndị ọzọ ubi na ubi-enye a ole na ole isi Ịhazi ụkpụrụ, m na-atụ anya doo gị nke abụọ. Akpa, uka mmekota nwere ike harnessed na-elekọta mmadụ nnyocha. Na, nke abụọ, na-eme nnyocha na-eji uka mmekota ga-enwe ike na-edozi nsogbu na mbụ yiri gaghị ekwe omume. Ọ bụ ezie na uka mmekota na-akwalite dị ka a ụzọ zọpụta ego, ọ bụ ihe karịrị na. Dị ka m ga-egosi, uka mmekota adịghị nnọọ ekwe ka anyị mee nnyocha ọnụ ala, ọ na-enye ohere anyị ka anyị mee nnyocha mma.
Na isi n'okpuru, n'ihi na onye ọ bụla nke atọ bụ isi iche nke uka mmekota, m ga na-akọwa a prototypical atụ; atụ mkpa ọzọ ihe na n'ihu ihe atụ; na n'ikpeazụ akọwa otú a n'ụdị uka mmekota ike ga-eji na-elekọta mmadụ nnyocha. The isi ga-ekpebi ise kwuru nwere ike inyere gị chepụta gị onwe gị uka mmekota oru ngo.